Onye editọ Bluefish: Ntugharị ọhụrụ 2.2.11 dị maka obere ndozi | Site na Linux
Nke a na ọnwa nke Eprel 2020, fechaa, ngwa ngwa na vasatail website Onye ndezi ederede multiplatform akpọrọ Onye editọ Bluefish enyewo anyị ozi ọma nke nnweta nke ọhụrụ version 2.2.11.
Onye editọ Bluefish a na-ewerekarị dị ka nhọrọ magburu onwe ya maka ndị mmemme na ndị na-emepụta weebụ, ma ndị ọhụrụ ma ndị ọkachamara, maka mkpokọta na mmepe peeji, na ọtụtụ mmemme mmemme ndị ọzọ niile.
"Ihe ndezi ederede na-emeghe maka ndị na-emepụta weebụ na ndị mmemme nwere ahụmahụ, nke na-akwado akara ngosi dị iche iche na asụsụ mmemme, mana ọ na-elekwasị anya n'ịmepụta weebụsaịtị na mmekọrịta mmekọrịta.". Banyere ngwa Bluefish
N'ime akwụkwọ ndị gara aga anyị ekwuolarịrị Bluefish, n'ihi na ọ bara ezigbo uru ma baa uru na otu ya. N'oge ndị ahụ, anyị kọwara ya dị ka ndị a:
"Bluefish bụ otu nhọrọ kachasị mma maka ndị mmemme na ndị na-emepụta weebụ, ma ndị mbido ma nwee ahụmịhe, maka mmepe nke ibe na weebụsaịtị, akwụkwọ edemede na koodu mmemme n'ozuzu ya. N'ezie, a na-akpọkarị Bluefish dị ka onye editọ HTML, mana ike ya na-aga n'ihu. Bluefish bụ n'efu, n'okpuru ikike GPL, ọ dịkwa maka Linux, Solaris, OS X, na Windows nyiwe.".
1 Onye editọ Bluefish: Ọhụrụ dị
Onye editọ Bluefish: Ọhụrụ dị
Ugbu a, n'ọnwa Eprel a, ndị ukara website nke ngwa, na-agwa anyị nnweta ihe ọhụrụ 2.2.11 mbipute, nke n'etiti ihe ndi ozo na akwukwo ohuru gunyere ihe ndia:
Ọ bụ obere ndozi mmezi na obere atụmatụ ntọhapụ. Ewezuga nkwado Python 3, nke bụ nnukwu mgbanwe. Ndị mmepe na-akpachara anya na ọ bụrụ na ị chịkọta Bluefish na Python 3, ịnwere ike ịnwe chinchi ọhụrụ.
Obere mgbanwe ndị ọzọ gunyere bụ: Nhọrọ nke pịrịgụọ nke abụọ (dịka ọmụmaatụ, ịhọrọ aha ọrụ nwere ihe gosiri), nke asụsụ nwekwara ike ịhazi ugbu a; nsonye nke ọrụ iji mejupụta ahịrị na oghere ruo na pịa pịa, iji nwee ike ịmalite ide ihe ọ bụla na ihuenyo (yana akara ngosi obosara); na idozi mkpọka mgbe ị na-eme diski buru oke ibu dochie omume na ọtụtụ faịlụ.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, "Chọta ma Dochie" ugbu a na-eleghara faịlụ ndabere anya. Na mgbakwunye na idozi ihe nkedo cursor na akara akara maka obere ahụhụ, na-agbakwunye obere atụmatụ ọhụrụ, itinye ntinye nke iwu mpụga na ọnọdụ cursor dị ugbu a, na imelite ọtụtụ n'ime faịlụ asụsụ, dị ka: CSS, Eke Ọgba na HTML.
Maka ozi ọzọ na Bluefish, I nwekwara ike inyocha gị Wiki y Manual.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ihe ọhụrụ 2.2.11 mbipute ọkụ, ngwa ngwa na vasatail Cross-ikpo okwu na-emeghe iyi editọ akpọ «Bluefish Editor», nke a na-ahụkarị dị ka nhọrọ dị mma maka ndị mmemme na ndị na-emepụta weebụ, ma ndị ọkachamara ma ndị ọkachamara, maka mmepe nke ibe na weebụsaịtị, yana mmemme mmemme ọ bụla n'ozuzu; bụrụ otutu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Editor Bluefish: Odi ohuru nke 2.2.11 di na obere ndozi